HTTP/ 1.1 503 Service Unavaliable Problem — MYSTERY ZILLION
HTTP/ 1.1 503 Service Unavaliable Problem
ကျနော်က PAC မှာ သုံးတာ ပါ
ftp: site ကနေ download ဆွဲတာ HTTP/ 1.1 503 Service Unavaliable ဆို တာ ပြနေလို.
enterupload server ကလည်း ဖြစ်နေလို.
ဘယ်လို လုပ်ရမယ် ဆို တာ ပြော ပြပေး ကြပါ
line က ADSL ပါ
အမြန်ပြော ပေးကြပါ မျှော် နေပါတယ် down စရာ တွေ အများ ကြီး ရှိလို.ပါ
503 error က service မရတဲ့ ပြသနာပါ။ ဖြစ်နိုင်တာက server ဘက်က ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာက ftp တွေ ပြန်ဖွင့်ထားပေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် server ဘက်ကပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ FTP ကနေ download ချမယ်ဆိုရင် browser အစား filezilla လိုမျိုး application တွေ သုံးပြီးစမ်းကြည့်ပါ။